Warbixin Shaacisay In Somaliland Ka Nabadgelyo Badan Tahay London – somalilandtoday.com
Warbixin Shaacisay In Somaliland Ka Nabadgelyo Badan Tahay London
(SLT-London)-Warbixin ay baahisay laanta af Ingiriisiga ee dunida la hadasha ee Idaacadda BBC-da, ayaa lagu sheegay in Boqolaal Dhallinyarro ah oo Ingiriiska u dhashay la geeyo dalalka Geeska Afrika si ay uga badbaadaan faldambiyeedyada Mindiyaha lagu galo oo ku soo batay Ingriiska.
Warkaasi waxa uu intaas ku daray In Boqol qof Mindi lagu dilay sannadkan dalka UK, iyadoo oo Boqolkiiba Siddeed dadkaas la dilay ay ahaayeen Dhallinyarada Soomaalida Ingiriiska.
Warbixintu waxa lagu waraystay qaar ka mid ah waalidka Soomaalida, kuwaasi oo caddeeyey in iyagoo dambiyada kala cararaya caruurtooda ay u diraan dalal Somaliland iyo Kenya ka mid yihiin oo ay u doorbideen dhinaca ammaanka.
Gabadh la yidhaahdo Hooyo Aamina ayaa sheegtay inay wiilkeeda oo 15 jir ah u dirtay Somaliland markii ay aragtay inuu ku dhex milmay dhallinyaro cusub oo ay rafiiqeen, waxaanay intaas ku dartay in Sannadkii uu Somaliland joogay uu inankeedu hagaagay oo uu xiiseeyey inuu sii joogo halkaas.
Haweenaydaasi waxay xaqiijisay 17 maalmood ka dib, markii dib loogu soo celiyey Ingiriiska bishii November ee Kal-hore in Booliska London qabteen afar jeer oo uu noloshiisu diiqad gashay.
Hooyo Aamina waxay ku dooday in markii uu inankeedu joogay Somaliland uu boqolkiiba boqol badbaado ku naaloonayey, waxaanay tidhi; “Somaliland wuxuu ku noolaa amni iyo badbaado marka loo eego xilliga uu joogo UK , waxaanu boqolkiiba boqol ku badbadayey Somaliland oo uga ammaansan London.”